Izizathu Eziyisiseko Zokususa Indawo Yendawo Kuloluhlu lokudlulisa - Ziqhelise kwi-Semalt
uLis Mitchell, u-8 (Semalt uMphathi weNtuthuko yoMthengi, uthi xa unayo iwebhusayithi, iqela lakho liya kuhlola le nto. Ukuba ngaba naliphi na ixesha umntu ovela kwiqela lakho uqhuba inguqu yophuhliso lwakho lokusebenza lwewebhu kunye nekhowudi yokulandelela ye-Google Analytics, ngoko ke kufuneka baqhube kwizinto ezithile ezivuthayo.
Ukuqala, i-localhost iyaqhubeka ibonisa kwiingxelo zeReferrers. Okwesibini, ii-metrics zakho zeewebhu ezifana nezinga lokuhlawula, inani leemboniselo zephepha, amazinga okuguqulwa nokunye. Njengokuba kunjalo, ezi methrikhi ziya kukhishwa ngenxa yokuba ilungu leqela liqhuba uvavanyo kwiwebhusayithi, izinto zidibaniswa. Awuyi kufuna, ngaba wena
Unokulungisa le meko ngendlela elula kakhulu - bandeau asymmetric dress. Enyanisweni, unendlela ezintathu ozilahlayo. Kungakhathaliseki ukuba ukhetho lwakho lusebenza nje ngokutyelela olutsha. Idatha ekhoyo iya kuhlala ihlambulukile, kwaye awukwazi ukwenza nantoni ngalokhu.
Hlanganisa icebo lokukhutshwa kwi-Google Analytics
Ukongeza ikhefu yokucoca kwi-akhawunti yakho ye-Google Analytics yindlela elula kwaye elula yokulungisa inkqubo ngokuxuba ama-metric ahlukeneyo. Awunakuze ufune ukungenelela kwiqela lobugcisa. Nazi ezinye iingcebiso:
vula i-akhawunti yakho ye-Google Analytics ukhethe 'I-Admin.'
eyakhe imbonakalo yikholamu cofa 'Izihlungi'
kusethe iifayile entsha ngokukhetha 'Iifayile ezintsha'
ukudala i-'Freeetermined Filter 'entsha, eya kubandakanywa kwi-intanethi yegama le-'hosthost'.
Qaphela ukuba unokwenza utshintshe igama lendawo yokuhlala kuyo nayiphi na igama elingummkeli lakho iqela lakho lisetyenzisiweyo. Kulungile noko, ukuba iqela lophuhliso lwenzeka ukuba lenze ukwabelana ngenethwekhi yakho, ngoko unako ukukhuphela lonke uluhlu lwe-IP Ngendlela leyo, iimetriki zakho aziyi kukhankanywa. Yenza isicatshulwa sakho ngokukhawuleza ukuba ungabandakanyi 'isithuthi kwiidilesi ze-IP,' kwaye usuphelile.
Lo lukhetho olufanelekileyo xa lufaniswa nokuhlaziya izihlungi zeGoogle Analytics. Hamba uye kumboniso wokulandelela kwaye uqaphele i-ID yesazisi esetyenziselwa ukugcina iithebhu kwi-analytics. Ukuba unokuhlaziywa kwi-Universal Analytics, ngoko uya kuhlahlela into efana nale: ga ('yakha', UA-98765432-1 ',' website.com ').
Qaphela ukuba esikhundleni somzekelo, uza kusebenzisa i-domain yakho yangempela. Ngethamsanqa okanye ngelishwa, kuya kufuneka ube ngumfundi kwi-jargon yobugcisa. Ngokomzekelo, unokufuneka usebenzise i-statement kwinxalenye ethile kwikhowudi. Nangona kukho ukukhankanywa kwenkqubo elula, kufuna ukuba kubhalwe ikhowudi entsha.
Ukuba iwebhusayithi yakho isebenzisa ulwimi lwe-PHP njengolu hlobo lweWindowsPress uze uhlele unyawo olwenza ngokuqinisekileyo luquka i-Google Analytics snippet. Kukho nokuba kungenzeka ukuba umncedisi wakho uvumela iinkonzo zewebhu ukuqhuba kwimodi yophuhliso okanye kwimveliso. Naluphi na umcimbi, awukwazi ukungahambi kakuhle.
Emva kokuba wenze le nguqulelo, kukho imfuneko yokubona ukuba isebenzayo okanye ayikho. Yenza uvavanyo ngosuku okanye emibini emva kokuqinisekisa. Khetha uluhlu olufanelekileyo lweedatha, enye engabandakanyi iintsuku ngaphambi kokuba utshintshe.